Margarekha कोहलपुरमा जारि प्रथम माबि स्तरीय उपमेयर छात्रा क्रिकेट प्रतियोगितामा जनज्योती मा.वि ६ बिकेटले बिजयी र साईनिङ स्टार माबिले २ रनको रोचक जित – Margarekha
कोहलपुरमा जारि प्रथम माबि स्तरीय उपमेयर छात्रा क्रिकेट प्रतियोगितामा जनज्योती मा.वि ६ बिकेटले बिजयी र साईनिङ स्टार माबिले २ रनको रोचक जित
कोहलपुरमा जारि प्रथम माबि स्तरीय उपमेयर छात्रा क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत आईतबार भएको पहिलो खेलमा साईनिङ स्टार मा.वि. बिजयी भएको छ ।
९९ रनको लक्ष्य पछ्याउँदै मैदानमा उत्रिएको ग्रिनपिस मा.वि. का खेलाडीहरु ९६ रनमे समेटिएका थिए । ग्रिनपिसकालागि लब्ली विष्ट (१७) बाहेक अरु खेलाडीहरुले दोहोरो अंक जोड्न सकेनन् ।
उक्त खेलको वमन अफ द म्याच साईनिङ स्टारकी खेलाडी सुरक्षा परियार घाषित भईन ।प्रतियोगिता अन्तर्गत आईतबार सम्पन्न दोस्रो खेलमा जनज्योती मा.वि ६ बिकेटले बिजयी भएको छ । दिब्यबिद्या सदन कोहलपुरलाई फराकिलो रन अन्तरले पराजित गर्दै जनज्योतीको टिमले जित निकालेको हो ।
२७ जेष्ठ २०७५, आईतवार १९:३० प्रकाशित